Shiinaha Acrylic xayaysiinta sanduuqa iftiinka tamarta keydinta tamarta ayaa calaamadeeya soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Zhengcheng
Xullo alaabta ceyriin oo tayo sare leh, oo ay u naqshadeeyeen naqshadeeyayaasha, si adag u koontaroolaan tayada, calaamado heer sare ah oo aad u fiican, isla markaana abuuro muuqaal sumadeed weyn.
Magaca badeecada: Calaamadaha sanduuqa iftiinka tamarta lagu keydiyo ee loo yaqaan 'Acrylic ads'
1. Qiimaha maalgashiga bilowga ah ee soosaarida boodhadhka caadiga ahi wuu yara hooseeyaa, sababtoo ah tabeelayaashani inta badan waxay ka samaysan yihiin alwaaxda acrylic-ka dib loo warshadeeyay. Si kastaba ha noqotee, xayndaabyadu way libdhi doonaan, qallooci doonaan, gabi ahaan doonaan iyo dhibaatooyin kale 3 illaa 5 bilood gudahood, taas oo si weyn u gaabinaysa nolosha adeegga calaamadda.
2. Soo saarida sanaadiiqda iftiinka dhaqameed, kloroform-ka loo yaqaan 'dilute xabagta' ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu xiro dhejiska iyo baararka. Waxqabadka shaabadu wuu daciif yahay, waxayna u nugushahay saameynta heerkulka iyo isirrada dhaqaaqa si ay u keento dildilaac. Boorka iyo wasakhda ayaa si dhib yar isugu soo ururi doona sariirta iyo baararka ka dib markii roobku maydho. Sidaa darteed, siigada iyo wasakhda lama nadiifin karo, waxayna saamayn ku yeelan doonaan saamaynta iftiinka leh ee calaamada sidoo kale waxay dhaawici doonaan muuqaalka calaamada.
3. Sanduuqyada iftiinka dhaqameed inta badan waa loo qaabeeyey iyadoo loo eegayo cabirka goobta. Haddii dukaanku dhaqaaqo, heerka isticmaalka calaamadda asalka ah wuxuu ka yar yahay 5%.
Dhibaatooyinka lagu xaliyay zhengcheng
1. Korsato Jabhada loo yaqaan 'acrylic board', xasiloonida sare, dusha sare iyo gudbinta iftiinka xoogan. Marka loo isticmaalo tubooyinka LED-ka, ileysku waa isku mid. Isla mar ahaantaana, maaddadani waa mid u adkaysata falaadhaha 'ultraviolet rays', ma fududa in la libdho, ma fududa in la beddelo, oo waxay leedahay adeeg dheer.
2. Saxeexa sanduuqa iftiinka ee Zhengcheng waxaa lagu kala jaray sanaadiiq badan oo iftiin leh, taas oo ay fududahay in la rakibo. Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale dib ayaa loo rakibi karaa oo dib loo isticmaali karaa ka dib marka dukaanka la raro.
Hore: Bannaanka hoggaanka u ah iftiinka iftiinka cuntada
Xiga: Dukaanka ku habboon dukaanka saxeexa hore ee Yonghui
Saxeex Boodhadhka Iftiinka
Calaamadaha Sanduuqa Iftiinka
Calaamadaha Khaanadaha bannaanka loo yaqaan 'Acrylic Light'
Bannaanka Sanduuqa Nalalka Dibadda
Calaamadaha Khaanadaha Led Light
Saxeex Farmashiyaha, Calaamadaha Xayeysiinta, Calaamadaha Iftiiminaya, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa,